Etu ị ga - esi duzie Ọnwụnwa Mkpanaka Na - aga nke Ọma-News-NANTONG SKY SAFETY PRODUCT CO.LTD
Etu aga - esi duzie Ọnwụnwa Mkpanaka Na - aga nke Ọma
Oge: 2020-09-23 Hits: 2
Kedu ụzọ kachasị mma iji nyochaa arụmọrụ nke akụrụngwa nchekwa onwe gị? Nke ahụ dị mfe - nnwale aka uwe. Ọ bụ usoro nyocha nke ubi dị iche iche nke uwe aka nchekwa, ma site na otu isi ma ọ bụ site n'aka ọtụtụ ndị nrụpụta, iji mata uwe kacha mma maka otu ọrụ. Na-elele ihe dịka nkasi obi, iji ọrụ, yana itinye n'ọrụ nke ndị ọrụ gị. Mgbe emechara ya n'ụzọ ziri ezi, uru dị na nnwale glove gụnyere:
l Mma mmemme nchekwa na akụrụngwa
l Mbelata nke mmerụ ahụ
l Nghọtawanye banyere nsogbu nchekwa aka n'etiti ndị ọrụ
l Ọnụ ọgụgụ dị elu nke nnabata na nchekwa PPE nchekwa aka
l Mbelata ego nke metụtara aka nchekwa site na ịbawanye arụmọrụ na ogologo oge nke ọrụ aka, ọnụego mkpuchi belata, ụgwọ ahụike, yana nkwupụta ụgwọ ọrụ ndị ọrụ
Kedu ka ị si eme ihu aka PPE iji nyere gị aka ịhụ ụdị nsonaazụ ndị a? Gụọ na.
1. Nyochaa ihe egwu na gburugburu ebe obibi
Mgbe ịmalitere nyocha aka, ọ dị mkpa ịtụle ọtụtụ nsogbu metụtara ngwa dị ka o kwere mee. Zaa ajụjụ ndị a n'uju:
Olee nsogbu dị ugbu a?
Mee nyocha zuru oke ma depụta ihe egwu niile dị na ọdachi. Ndị a nwere ike ịgụnye igwe, iko, osisi, ịwa osisi ma ọ bụ ịcha ihe, ahịhịa ma ọ bụ mma, waya, agịga, hama, nkwonkwo akpịrị, ọkpọkọ, mkpuchi, njikọ, wdg. Kedu maka nchikota enwere ike ma mebie mmerụ sitere na ngwaọrụ ndị dara ada, nkume, ọkpọkọ, wdg.
Ruo ókè ha a protectionaa ka a chọrọ nchebe?
Ofdị uwe aka na ọkwa nchebe ga-adabere na ngwa ahụ. Lelee maka ịkpụ, abrasion, na mgbapu ihe ize ndụ iji chọpụta ọkwa aka gị, yana mmetụta mbibi ọ bụrụ na ogwe aka gị chọrọ nchedo mmetụta aka. Applicationsfọdụ ngwa chọrọ nguzogide ọkụ, mpempe mgbochi vibration, ma ọ bụ nchekwa kemịkalụ.
Kedu ụdị ndọkụrịta achọrọ?
A ghaghị ịtụle nsị nke glove na ọrụ ahụ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ndị ọrụ na-ewepu uwe ha iji mezue ọrụ dexterity dị elu. Jụọ onwe gị: Ndị ọrụ gị ọ chọrọ ka ha nwee nghọta dị elu iji rụọ ọrụ ha? Hà ga-atụtụ obere akụkụ ma ọ bụ mpempe akwụkwọ plywood ma ọ bụ ogwe igwe?
Ebee ka ọrụ a na-arụ?
Ọnọdụ ebe ndị ọrụ gị na-arụ ọtụtụ ọrụ ha ga-enwe mmetụta na nhọpụta glove. Hà nọ n'ime ụlọ ka ọ bụ n'èzí? Ọ bụ ebe na-ekpo oke ọkụ ma ọ bụ gburugburu oyi? Enwere ihe ndị ọzọ dị mkpa maka ọrụ ahụ nwere ike ịkpata esemokwu, dị ka ịrụ ọrụ gburugburu ọkpọkọ mmanụ ma ọ bụ ijizi osisi, nchara, ma ọ bụ iko?
Enwere nsogbu ndị nwere ike ijide?
A ghaghị imepụta ihe nkwụ aka iji nye njirimara njide kwesịrị ekwesị maka ngwa ọ bụla, ebe njigide na-adịghị mma nwere ike ibute mbibi dị ukwuu site na ngwaọrụ na mma, na mgbakwunye na ike ọgwụgwụ na nrụgide. Lezienụ anya n'ọrụ ndị pụrụ imetụta njide ndị ọrụ, dị ka ngwa ndị metụtara apịtị, mmanụ, mmiri nhicha, na ihe ndị ọzọ n'ebe ọrụ.
Kedu ọnọdụ okpomọkụ nke ihe eji arụ ọrụ?
Ndị ọrụ ha na-arụ ọrụ mgbe niile maka ngwa ọrụ ma ọ bụ akụkụ dị oke oke ma ọ bụ oyi? Nke a nwere ike imetụta akụrụngwa uwe aka dị ka njide, nchedo, na anwụ ngwa ngwa.
Enwere ihe ọ bụla na-emebi emebi? Tụlee ma enwere mmiri dị ka ihe mgbaze ma ọ bụ acid dị ugbu a nwere ike imebi eriri glove ma ọ bụ mkpuchi.
2. Chọpụta Ngwa Ngwa
Igodo nke ịchọta ezigbo aka ọrụ maka ọrụ ahụ bụ ileba anya na ngwa na ọrụ ndị na-anọchi anya ọtụtụ ọrụ a na-arụ. Họrọ otu uwe aka na-enye nkasi obi dị mkpa, nchedo na enweghị ntụpọ maka ọrụ ndị a na-ahụkarị, kwa ụbọchị.
Ọ bụ ezie na ọ na-adọrọ adọrọ ịchọ otu glove solution, nke bụ eziokwu bụ na otu glove enweghị ike igbo mkpa niile. Ọ bụrụ na i jiri uwe aka dochie ndị ọrụ gị niile, ọ ga-adịrị gị mfe ịrụ ọrụ, ọrụ kacha dị egwu, ma ọ bụ ngwa nke na-eme naanị otu ugboro n'izu ma ọ bụ otu ugboro n'ọnwa, ọ nwere ike inye gị obere nchekwa - ma ọ bụ oke - maka ọrụ ha na-arụ kwa ụbọchị.
Nke a ga-enwe mmetụta na-adịghị mma na nnabata, nsonaazụ nchekwa, yana arụmọrụ zuru oke nke usoro nchekwa aka gị. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, nye uwe aka dị iche maka iji ya rụọ ọrụ dị oke ma ọ bụ na-adịghị ahụkebe. Ọtụtụ oge ọ kachasị mma maka ndị ọrụ, yana maka mmemme nchekwa aka, iji ogwe aka nke na-enye nchebe dị mma maka ọrụ a rụrụ ọtụtụ oge.
3. Nyochaa Mmemme Ọgba Gị Ugbu A
Nnyocha nke ihe ngwọta aka gị dị ugbu a ga-enyere gị aka ịghọta ihe na-arụ ọrụ, ihe na-adịghị arụ ọrụ, na ebe ọ dị mkpa ịkwalite. Mụta ihe ndị ọrụ gị nwere mmasị banyere uwe ha na-eji ugbu a. Chọpụta ebe uwe anaghị egbo mkpa ha. Chọpụta ụdị azụmaahịa ọ bụla dị na mgbaaka ọhụrụ na nke ochie. Site na ịnakọta ozi a, ị nwere ike ịrụ ọrụ iji hụ na azụmaahịa a belatara yana ọ bụla gloves ọ bụla eji na-anwale ikpe ahụ na-enye otu atụmatụ ahụ ndị ọrụ gị marala ahụ.
Can nwere ike idozi ọjụjụ ọ bụla nwere ike ibilite n'oge ikpe, nhọrọ, na usoro mmejuputa. Mara ihe ndị otu gị na-amasị na ihe ndị na-adịghị amasị ha ga-enyere gị aka ịchọta ihe ka mma ma kọwaa otu esi emeziwanye uwe ochie gị.
4. Họrọ ndị ọrụ nnwale gị
Inwe ndị ọrụ aka nri ga - enyere gị aka ịchọta ezigbo aka aka ma nye aka ịzụta - n'aka ndị ọrụ ọzọ mgbe ahọpụtara otu glove na mmemme ọhụrụ ahụ. Họrọ ndị mmadụ maka ndị ọrụ ikpe ahụ bụ ndị siri ike gbasara nchekwa na ọrụ ha ma nye gị nzaghachi ziri ezi ma na-ewuli elu. Gbaa ha ume ka ha kenye ahụmịhe ha, ihe ndị masịrị ha, na ihe ọ bụla ọzọ nwere ike ịba uru na nhọta glove. Mara nke ọma na nzaghachi a ga - enyere aka ịchọpụta ụdị aka a na - enyecha ndị otu niile. Mee ka ha mata na nzaghachi ha ga - esoro onye na - emepụta glove ga - ekerịta ya ma nwee ike rụpụta mmezi ngwaahịa
Nweta nkwekọrịta site n'aka ndị ọrụ ahụ na-ekwupụta na ha ga-enye nzaghachi ederede yana glove sample na njedebe nke ikpe ahụ ebe ọ bụ na ha abụọ dị mkpa iji mee mkpebi kacha mma. Nye nzaghachi ụdị ndị dị mfe iji.
5. Na-anakọta ma nyochaa data
Mgbe ị rutere na njedebe nke oge nyocha gị, chịkọta ụdị nzaghachi niile na uwe aka ejiri na ikpe ahụ. Nye ndị ọrụ ikpe ahụ ohere ịza nzaghachi ọnụ, wee dekọọ ihe ekwuru. Dekọọ akụkọ na akụkọ banyere "nchekwa" ọ bụla site na ihe ọghọm ma ọ bụ mmerụ ahụ mere n'oge nnwale glove. Na-anakọta ma nyochaa ụdị nzaghachi ederede. Nyochaa ihe nlele glove ikpe ma rịba ama ọnọdụ ha n'ihe gbasara ịkpụ akwa na ntachi anya nke akwa ahụ. Gụnye ozi niile dị mkpa na akụkọ gị. Ọzọkwa, ọ dị mkpa ịghọta na glove mbụ ma ọ bụ gburugburu gloves a nwalere nwere ike ọ gaghị adabara mkpa gị.
Ka ị na-aga n'ihu ịnwale gloves, ọ nwere ike ịkwụ ụgwọ iji gagharịa ihe ndị akọwapụtara nke ngwa dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, enwere mmiri mmiri nke a na-agụghị na nyocha mbido mbụ gị na gburugburu ebe ọrụ gị nke nwere ike ibute ọdịda ngwa ngwa ma ọ bụ iyi akwa? Otu ebumnuche nke usoro nyocha-glove bụ ikpughere ụdị ozi a ma jiri aka gị họrọ ya. Tinye data ohuru na profaịlụ ngwa na ntule ihe ọghọm ka ị na - ahọta ma na - anwale oghere nke usoro glove ọzọ.
6. Zụlite nkọwa nkọwa Glove ikpeazụ
Dabere na data niile anakọtara mgbe ị nwesịrị ikpe na-aga nke ọma, ị nwere ike belata ma họrọ uwe aka gị. Enwere ọtụtụ nkọwa dị iche iche na uwe aka, gụnyere:
l Eriri ụdị (eg, echebe taịl nile, naịlọn, wdg)
l Ibu isi (oz / yd²)
l Ewu ulo
l Eriri eriri, terry, wdg.
l Uwe mkpuchi, ntụpọ, nkwụ nkwụ
l Ambidextrous (na-enye agbatị agbatị)
l Enyere ume isi aka isi
l Cuff ogologo
l Yarn nha
l Aka uwe
l Cut eguzogide
l Ume ume mkpịsị aka isi sadulu (mba ike na usoro ule)
l Mgbapu mgbapu
l Nsogbu Abrasion
l Mgbapu Ọdụ
l Performancekpụrụ omume ndị ọzọ achọrọ maka ọrụ ahụ (ule ọkụ, ule abrasion, wdg)
ANSI / ISEA 105 Needlestick Nnwale kọwara